Faransaay carraan moo gahumsaan Waancaa Adunyaa mo'atte? - BBC News Afaan Oromoo
Faransaay carraan moo gahumsaan Waancaa Adunyaa mo'atte?
Faransaay shaampiyoonaa Waancaa Adunyaa 21ffaa bara kanaa taateetti. Gooliiwwan 4 Faransaay galchan keessaa addabbii peenaaliitii Antoniyoo Gireezman, goolii Paawul Pogbaafi kan dargageessa ganna 19 Kiiliyaan Maappeetiin kan galmaa'an yommuu ta'an gooliin tokkichi garuu kan taphataan sarara duraa Kirooshiyaa Maanzukiich ofirratti lakkoofsisedha.
Faransaay bara 1998 Waancaa Adunyaa qopheessitee ofumaa kan mo'atte yoo tahu Rashiyaa dirree Luuzhinikii irratti morkii Kiroshiyaa waliin taasifteenis 4 fi 2'n mochuun leenjisaa Dider Diishoo jalatti seenaa haaraa biraa galmeessitetti.
Waggaa 20 dura yeroo Faransaay Waancaa Adunyaa injifatte leenjisaan kun dursaa taphatootaa tahuun waancicha injifatee ture. Dider Diishoon nama 3ffaa taphataa fi leenjisaa tahuun waancaa injifachuu danda'edha.
Sarartuu dirree kubbaa miilaa waldhabdee uumte
Gareen Kirooshiyaa haala gaariin taphatanis carraan waan itti jabaate fakkaata.Faransaay yaadannoo bara 2016 xumura Waancaa Awurooppaaf gahanii Poorchugaaliin mo'amanii dhaban haqaniiru.
Gareen Kirooshiyaa galchii jalqabaa Maanzuukich gareesaarratti lakkofsiseef sababa taate, Gireezmaan sobee akka nama diraamaa hojjetuutti kufee jedhan. Dabalataan rukuttaan peenality kenname viidiyoodhaan deeggaramus amansiisaa hin turre jedhan.
Kirooshiyaan duuba ka'uun garee Faransaay irratti gahumsa gaarii yommuu agarsiisuu jalqaban galchiin Pool Pogbaa fi Kiliyaan Baappee miidhama xiqqaa isa mudatee turerraa haala gaariin kan hin bayyaanatne Daani'eel Subisich darbuun lakkaa'amuunsaanii akka taphichi itti cimu taasiseera.
Fraans Waancaa Addunyaarratti Afrikaa bakka buutii?
Taphaa ittisa irratti hundaa'ee fi deebisanii jifachuun kan beekamu gareen Faransaay waancaa Adunyaa Raashiyaatti qophaa'e kana kan mo'atan gahumsaan malee carraadhaan qofa miti kan jedhanis jiru.
Gareen faransaay baranaa garee taphatoota 23 keessaa taphatoota guguraacha 13 qaba.
Kirooshiyaan biyyi uummata miiliyoona 4.1 qabdu biyya xiqqoo yeroo jalqabaaf xumura waancaa adunyaaf geesse yommuu taatu dabalataan kun seenaa biyyittii keessatti kan jalqabati.
Kilinikoota UK ‘durbummaa qorannaafi bakkatti deebisna' jedhan